Home News Soomaali lagu dilay weerarkii Al-shabaab ku qaadeen Nairobi!!
Soomaali lagu dilay weerarkii Al-shabaab ku qaadeen Nairobi!!
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in weerarkii shalay Gelinkii dambe lagu qaaday Hotelka Dusir2 ee Xaafada Westland ee Magalada Nairobi Xarunta dalka Kenya.
Weerarkaas oo ay mas’uuliyadeeda sheegteen Al-Shabaab ayaanan weli sirasmi ah loo soo bandhigin khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay.
Warar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan inay weerarkaas ku geeriyoodeen laba Nin oo Soomaali ah ah oo wada dhashay,kuwaas oo Magacyacdooda lagu sheegay Feysal Daahir iyo Cabdalla Daahir.
Inkasta oo dowladda Kenya ay sheegtay in laamaha ammaanka ay la wareegeen dhismaha la weeraray ayaa haddana waxaa goobta laga maqlaya dhawaaqa qaraxyo iyo rasaas